Eyona bhetri inkulu emhlabeni iya kuvela eTesla kwaye iya kuba se-Australia | Iindaba zeGajethi
Ngobungakanani bokugcina ikhulu leemegawathi, inkampani I-Tesla iya kulawula ibhetri enkulu yelithium eya kwenziwa nguTesla kwaye ifakwe kwifama yomoya kwidolophu yaseJamestown, e-Australia.
Eli nyathelo liphendula kwiprojekthi edibeneyo eyenziweyo phakathi kweTesla kunye nenkampani yamandla ahlaziyekayo uNeoen. Zombini sele zifikelele kwisivumelwano noRhulumente waseMzantsi Australia ngoko ke iprojekthi sele inesibane esiluhlaza ukuze sibe yinyani.
Eyona bhetri inkulu emhlabeni iya kuba netywina leTesla
UTesla noNeoen sele befikelele kwisivumelwano nabasemagunyeni ngofakelo lokuba yeyiphi eya kuba lelona bhetri inkulu emhlabeni. Isisele esikhulu esinomthamo we-100 MW, umthamo kathathu kunelona bhetri likhulu lisebenza ngoku.
U-Elon Musk, u-CEO we-Tesla
IJamestown, idolophu ekumazantsi eOstreliya, yindawo ekhethwe kwiprojekthi enamabhongo. Ngokukodwa, le bhetri inkulu iya kufakwa kwifama yomoya esakwinkqubo yokwakha kodwa ukugqitywa kwayo kucwangcisiwe phambi kokuphela kwalo nyaka 2017.
Nangona iinkcukacha zesivumelwano seprojekthi zingekenziwa zaziwa esidlangalaleni, iyaziwa iindleko zizonke ziya kudlula kwi-50 yezigidi zeedola kwaye eyona njongo ibalulekileyo kukugcina kunye unike amandla kwigridi yombane kwiimeko ezingxamisekileyo.
Umphathi omkhulu we-Tesla, u-Elon Musk, unike inkomfa noonondaba kwisixeko sase-Adelaide echaza ukuba ibhetri inokuhlawuliswa xa kukho amandla agqithisileyo kwaye ixabiso lawo liphantsi, ukuze isetyenziswe xa ixabiso lemveliso vuka. Ngale ndlela, "ixabiso eliqhelekileyo lomthengi wokugqibela lincitshisiwe".
Kwakhona, UMusk uzibophelele ekugqibezeleni ufakelo ngaphakathi kweentsuku ezili-100; Ngaphandle koko, yena ngokwakhe uya kuthwala iindleko zeprojekthi.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Iindaba zeGajethi » ngokubanzi » Izaziso » Ibhetri enkulu kunazo zonke iya kuvela eTesla kwaye iya kuba se-Australia